Le nqaba yakudala yakhiwe ngamatye isasazeke ngaphezulu kwemigangatho emine, iye yahlaziywa ngokugqibeleleyo kwaye yaguqulwa yaba likhaya leholide elithandekayo. Ime emazantsi e-Assisi, ngokuqinisekileyo yenye yezona ndawo zintle kwaye zibukekayo zokubuka eyona dolophu idumileyo netyelelwa kakhulu yase-Umbria.
Icala lemida yomgangatho ophantsi kukho enye indlu ehlala unyaka wonke. Ipropathi iphawulwe ngengca egcinwe kakuhle kwaye enezixhobo kunye nepaki enkulu evaliweyo yemoto.
Umgangatho ongaphantsi (ophawulwe ngesilingi enemigangatho yamandulo) unegumbi lokuhlala/ lokutyela elinendawo yokusebenzela eyakhelwe ekhitshini kunye nokufikelela egadini.
Kumgangatho woku-1 (ukufikelela kuphela kwizinyuko zangaphandle) kukho igumbi eli-1 elinebhedi elinegumbi lokuhlambela elineshawa kunye negumbi lokuhlambela kwaye kumgangatho we-2 kukho igumbi lokulala eli-1 elinegumbi lokuhlambela elineshawa. Umgangatho wesithathu unegumbi lokuhlala / isifundo esinebhedi yesitulo kunye nokufikelela kwi-terrace encinci enembono entle, kunye negumbi lokuhlambela elineshawari.
Inqaba, inikwe isakhiwo sayo soyilo oluthile, ayicetyiswa kwiintsapho ezinabantwana abancinci.
Lo mhlaba ukufuphi nombindi wesixeko esidala sase-Assisi kwaye unokufikelelwa ngeenyawo ngendlela yokungcola yamandulo okanye ngemoto (malunga neekhilomitha ezi-2). Qiniseka ukuba undwendwela iindawo ezifana nePerugia (23km), kunye neLake Trasimeno (40km) into ongayi kuphoswa kuyo.
Le nqaba yakudala yakhiwe ngamatye isasazeke ngaphezulu kwemigangatho emine, iye yahlaziywa ngokugqibeleleyo kwaye yaguqulwa yaba likhaya leholide elithandekayo. Ime emazantsi e-Assisi, ngokuqinisekileyo yenye yezona ndawo zintle kwaye zibukekayo zokubuka eyona dolophu idumileyo netyelelwa kakhulu yase-Umbria. Icala lemida yomgangatho ophantsi kukho enye indlu ehlala unyaka wonke. Ipropathi iphawulwe ngengca egcinwe kakuhle kwaye enezixhobo kunye nepaki enkulu evaliweyo yemoto. Umgangatho ongaphantsi (ophawulwe ngesilingi enemigangatho yamandulo) unegumbi lokuhlala/ lokutyela elinendawo yokusebenzela eyakhelwe ekhitshini kunye nokufikelela egadini. Kumgangatho woku-1 (ukufikelela kuphela kwizinyuko zangaphandle) kukho igumbi eli-1 elinebhedi elinegumbi lokuhlambela elineshawa kunye negumbi lokuhlambela kwaye kumgangatho we-2 kukho igumbi lokulala eli-1 elinegumbi lokuhlambela elineshawa. Umgangatho wesithathu unegumbi lokuhlala / isifundo esinebhedi yesitulo kunye nokufikelela kwi-terrace encinci enembono entle, kunye negumbi lokuhlambela elineshawari. Inqaba, inikwe isakhiwo sayo soyilo oluthile, ayicetyiswa kwiintsapho ezinabantwana abancinci. Lo mhlaba ukufuphi nombindi wesixeko esidala sase-Assisi kwaye unokufikelelwa ngeenyawo ngendlela yokungcola yamandulo okanye ngemoto (malunga neekhilomitha ezi-2). Qiniseka ukuba undwendwela iindawo ezifana nePerugia (23km), kunye neLake Trasimeno (40km) into ongayi kuphoswa kuyo.
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 5 m / ivenkile 8 km / yokutyela 8 km / isixeko esikufutshane (Todi) 8 km
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Todi PG